Ezona mpompo ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela Gqiba Isikhokelo ngo-2021
Ikhaya / Isikhokelo se-Faucet / Sesiphi esona sigqibelo sithandwa kakhulu kwiipompo zegumbi lokuhlambela?
2021 / 01 / 27 uhleloIsikhokelo se-Faucet 6761 0
Emva kokuba ukhethe ishawa yakho, ibhafu, ilize, ukutyibilika, kunye nombala wodonga, iipompo zakho zangasese zinokuziva ngathi zincinci. Inyaniso, nangona kunjalo, banokuba sisiqwenga sokwakha esidibanisa konke kunye ... okanye banokuphazamisa ukuhamba okubonwayo kwegumbi lonke.
Njengoko uthenga iipompo ezifanelekileyo kwigumbi lakho lokuhlambela, inokukunceda ukuqala kokhetho oludumileyo, ngakumbi xa kufikwa esiphelweni seompompo. Ke yintoni esona siphelo sithandwayo sompompo kwindawo yokuhlambela, kwaye uyazi njani ukuba yeyiphi into ekugqibayo ekufaneleyo?
Yeyiphi eyona Ndawo idumileyo yokugqibezela Ukuhlamba igumbi lokuhlambela?
Ukuphendula umbuzo weyona mpompo ithandwa kakhulu kuyinkohliso kuba akukho mthombo wesinye olandelela le datha. Iingcali zonke zinezimvo zazo, kwaye ukugqitywa kokugqwesa ngakunye nako kuyatshintsha ngokusekwe kwiindlela zokuhombisa ngokunjalo. Uninzi luthi i-nickel ye-brashi yeyona ndawo ithandwayo namhlanje, ngelixa abanye besithi yi-chrome.
Ekugqibeleni, nangona kunjalo, eyona nto ibalulekileyo kukuba ukhetha ukugqiba okulungele iimfuno zakho kunye nombono wakho wegumbi. Masithelekise ukugqitywa okuqhelekileyo ukubona ukuba zeziphi ezifanelekileyo kwigumbi lakho lokuhlambela.
Izinketho ezigqityiweyo ezigqityiweyo zokuGcina iiBhokisi zeBhafu
Ukukhetha kwakho ukugqitywa kwetephu kuye kwanda kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngaphambi kwee-2000s zakuqala, phantse yonke indawo yokuhlambela yayineebhedu ezicoliweyo okanye izinto zechrome. Sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo namhlanje, kodwa oko kunokuthetha ukuba ukuthenga kunokuba nzima kakhulu. Qalisa inkqubo yakho ngokufunda ngezona zigqibileyo zigqibeleleyo ozifumanayo kwaye ujonge izinto ezilungileyo nezingalunganga.
Kusenokwenzeka ukuba ukhe wayibona i-nickel ebrashiweyo rhoqo, nokuba khange uyiqonde ukuba ibizwa njani. Inombala ofana nesilivere kunye nelizwi eliphantsi elityheli okanye limdaka. Inokugqitywa kwe-satin ke ngoko inika i-sheen ethambileyo kunokuba ibonakalise ngokucacileyo. Kuqhelekile kumakhaya azo zonke iindlela namhlanje, ukusuka kwi-rustic ukuya kwindabuko ukuya kule mihla.
Iinkonzo zeNickel eBrashi
Ukuba ufuna indlela elula yokunxiba igumbi lokuhlambela, izixhobo ze-nickel ezi-brushed zilungile. Ukugqitywa kuyathandwa kangangokuba uya kuba neendlela ezininzi zokukhetha iifom. Ukugqitywa kuyomelele ngokunjalo, ngenxa yoko kuhlala kugcina ukubukeka kwayo okutsha-kwibhokisi iminyaka emininzi. Kwaye akukho thuba lincinci lokuba itompu yakho iqale ukukhangeleka iphelelwe lixesha.
Bendlela yeNickel eBrashi
Ngelixa malunga nayo yonke into yokufikelela kwigumbi lokuhlambela onokuyifuna iza kungena nge-nickel e-brushed, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kugqitywa kungangena kwiithoni ezahlukileyo ezivela kubavelisi abohlukeneyo. Oku kungenza kube yinto ekhohlisayo ukuba ufuna iifompo zakho zitshatise itawuli yakho, umnini webrashi yamazinyo, ibrashi yangasese kunye nezinye izinto.
Isalamane se-nickel esisondeleyo si-nickel ephosiweyo. Ngokuqhelekileyo inombala ofanayo kunye ne-nickel ebrashiweyo kodwa ngaphezulu kokugqitywa okuqaqambileyo.
Iinkonzo zeNickel ephosiweyo
I-nickel ephosiweyo kulula ukuyicoca kwaye inesiphelo esomeleleyo njenge-nickel e-brashi. Ngokubanzi, kubantu abafuna ukwahlula umahluko phakathi kwe-chrome kunye ne-nickel e-brashi, i-nickel ephosiweyo yindawo efanelekileyo ephakathi.
Bendlela Nickel olukhazimlisiweyo
Ukugqitywa kweMatte kunye ne-satin kuye kwanda kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Ngenxa yoko, uninzi lwabantu lubona i-nickel epholileyo njengobonakala buncinci kwaye bujongeka njengeyona nickel ibrashi. Kwakhona akuqhelekanga ukugqiba njengabanye abaninzi kuloluhlu. Oku kuthetha ukuba kunokuba yinto enzima ukuyifumana kwaye xa uyifumana, ihlala ibiza kakhulu.
I-Chrome yenye yezona zigqityiweyo ezaziwayo ngeenxa zonke, kwaye kungekuphela kwegama lokuhlobisa ekhaya. Inombala ofana nowesilivere kunye nokugqitywa okuqaqambileyo, okukhazimlayo. Yayisesona siphelo sidumileyo seompompo ixesha elide, nangona oko bekuncipha kule minyaka idlulileyo.
Kwiimodeli ezininzi zeepompo, i-chrome iya kuba sesona sigqibo sineendleko ezikhoyo kuba ixhaphake kakhulu kwaye ayibizi mali ininzi ukuyenza. Ngaphezulu koku, i-chrome ihlala ixesha elide ngokungagungqiyo kwaye inqabile ekukrwemeni, kwaye isenokuba sesona sigqibo silula ukufumana. Oku kwenza ukuba kube lula ukudibanisa iimodeli ezivela kubavelisi abohlukeneyo.
Ngethamsanqa i-chrome kulula ukuyicoca kuba eyona nto iphambili kuyo kukuba ibonisa iminwe kunye neendawo zamanzi ngokulula ngenxa yokugqitywa kwayo okuqaqambeyo.
Umnyama omnyama uye waba sisiphelo esithandwayo kunye nokuziva okunethezeka kwiindawo ezininzi zemidlalo, ukusuka kwizinto zokuhombisa ekhaya ukuya kwiimoto ezisebenzayo kwi-elektroniki. Oku kugqitywa kuyilwe ngokukodwa ukuba nobume oburhabaxa kwinqanaba elincinci. Oku kuvumela ubume bokubamba kunye nokusasaza ukukhanya kunokuba kubonakalise.
Iinkonzo zeMatte Mnyama
Imbonakalo eyahlukileyo, yanamhlanje yeyona nzuzo ibalulekileyo yamnyama emnyama. Ayisijongi nje kuphela intofontofo kodwa ikwahluka kakhulu, kuba umnyama uhamba phantse nayo nayiphi na inkqubo yombala wokuhlambela. Oku kugqitywa kwakhona kulula ukukucoca kunye nokugcina.
Bendlela: Matte Mnyama
Ukubuyela umva okuphambili kumnyama omnyama lixabiso lentengo. Abavelisi bayayazi ukuba ifunwa kangakanani, ke ngoko bahlawulisa ipremiyamu ngayo.
Ubhedu lolunye lwezongezo zamva nje kulungelelwaniso lwompompo odumileyo, kodwa kukuphinda ubuyele kumagumbi okuhlambela angaphambili. Iimpompo zeCopper ziqala ngombala o-orenji otshisiweyo, ukubonakala kokubonakala kobhedu olutsha. Abanye abantu bakhetha ukugcina ubhedu lwabo ngendlela egcina ukujonga okufana, ngelixa abanye bevumela iminyaka yobhedu ngokwendalo ide iphuhlise i-patina eyaziwayo yolwandle.
ICopper yimbonakalo eyahlukileyo kwaye intle, ngakumbi kumakhaya aneefashoni zorhwebo okanye zerustic. Nangona kunjalo, inezibonelelo zomsebenzi ezinomdla ngokunjalo.
Kwelinye, ubhedu luyakwazi "ukuziphilisa" ngokwalo ukuya kwinqanaba elithile, ngemikrwelo ebumnyama ngokuhamba kwexesha lide lidibane nepatina yendalo yobhedu. Ukongeza koku, ubhedu yinto yokubulala iintsholongwane ngokwendalo, ke yindlela eluncedo yokunciphisa ukusasazeka kweentsholongwane.
I-Copper ayisiyiyo eyomeleleyo yokugqitywa kwetephu. Inokuthi "iphilise" imikrwelo, kodwa kulula ukuba imikrwelo yenzeke kwasekuqaleni.
ICopper inokuba sisondlo esiphezulu ukuba ufuna ukugcina umbala wayo wokuqala weorenji. Ngaphezulu koku, ubhedu lukhetho olunqabileyo lokugqibela kwiipompo zangasese. Ukuba ufuna izincedisi kunye nezinye izinto ezincedisayo ukuze zingqinelane neempompo zakho, unokuba nexesha elinzima lokuzifumana.
Ubhedu olukhazimlisiweyo lwaludume ngokumangalisayo kwii-1980s kunye nee-1990s. Ukuqala ngasekupheleni kweminyaka yee-1990 kunye nee-2000s zokuqala, nangona kunjalo, kwabonwa ngathi kuphelelwe lixesha. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, nangona kunjalo, sele iqalile ukubuya.
Ngombala wayo otyheli, okwegolide, ubhedu kulula ukuwabona. Ubhedu olukhazimlisiweyo ngokukodwa lunokugqitywa okuphezulu.
Iinkonzo zeBronzi ephosiweyo
Enkosi kwis sheen ecwebezelayo, ubhedu olukhazimlisiweyo kulula kakhulu ukuba licoceke, kufana ne chrome. Ihlala ihlala ixesha elide, nangona oku kuyahluka ngokuxhomekeke kumgangatho webhobho.
Bendlela Brass olukhazimlisiweyo
Ukubuyisa izitayile ezindala kunokuba yinkohliso. Ngendlela efanayo apho kukho umgca ococekileyo phakathi kwe "retro" kunye "nomhla" kwifashoni, kufuneka ubhangqe ubhedu lwakho olukhazimlisiweyo kunye nokuhonjiswa okufanelekileyo kokuhlambela ukuze kubonakale ngathi kuqhelekile kunokudinwa.
Ubhedu olukhazimlisiweyo lunokubuyela umva, ngakumbi phakathi kwabo banesitayile se-retro chic, kodwa abanye abantu bakhetha umbala wobhedu ngokugqitywa okwangoku. Kulapho kungena ubhedu be-satin. Abanye abavelisi bayibiza ngokuba yibrashi yobhedu, kodwa phantsi kwalo naliphi na igama, inetoni yegolide efana nobhedu kunye neshein enkulu.
Iinkonzo zeSatin Brass
Ubhedu lweSatin lunembonakalo ekhethekileyo yanamhlanje, kwaye ilingana kakuhle kumakhaya ajonge ukubonakala okuphezulu. Ngenxa yokuba ukugqitywa kwento ayinayo i-gloss ephezulu yobhedu olukhazimlisiweyo, ayibonisi iminwe ngokulula.
Umxhasi we-Satin Brass
Ngelixa ubhedu lwe-satin lukhula ekuthandeni, alukasasazeki kwimarike yokuhombisa yasekhaya. Oku kuthetha ukuba kunokuba nzima ukufumana izixhobo ezifana nezibuko kunye nemivalo yetawuli ehambelana neefompu zethu zobhedu.
Insimbi engenasici iye yaba sesinye sezona zigqibelo zithandwa kuwo onke amagumbi endlu, ukusuka ekhitshini ukuya kwigumbi lokuhlambela nangaphaya. Ijongeka ngokufana ne-nickel ebrashiweyo, kodwa intsimbi engenasici inesandi esiphantsi esiluhlaza ngelixa i-nickel iphantsi ngombala omthubi okanye omdaka. Okwangoku, intsimbi engenasici inokulingana kakuhle phantse kuyo nayiphi na indlela yokuhlambela.
Kwizinto ze Stainless
Ngenxa yokuba insimbi engenasici ithandwa kakhulu, uya kuba nexesha elilula lokufumana izixhobo ezilinganayo kunye nezixhobo zokuhlambela ukwenza ukubonakala okufanayo.
Insimbi engenasici inokuthandwa, kodwa ayilungelanga. Iyakrwela ngokulula. Kunokuba nzima nokucoceka kuba ayibonisi kuphela iminwe ngokukhawuleza kodwa ifuna ukucocwa ngezicoci ezikhethekileyo kwaye isulwe ngqolowa yentsimbi.
Ibronze egcotyiweyo yeoyile iye yakhula kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye njalo kwiipompo zangasese nakwiipompo zasekhitshini ngokufanayo. Ukugqitywa kujongeka kumdaka mnyama okanye phantse kube mnyama, kodwa ngeetoni zobhedu ezikhanyayo. Ngokuqhelekileyo inesiphelo esifana ne-satin, kwaye sithandwa kakhulu emakhaya kunye nasemakhaya, kunye namakhaya ane-Tuscan aesthetic.
Enkosi ngokuthandwa kwayo, i-bronze eyirubhi yeoyile ngoku iyafumaneka phantse kuyo yonke indawo ojonga kuyo. Oku kukunika uninzi lweetampu onokukhetha kuzo. Ukongeza, ukugqitywa okufana ne-matte akubonisi amabala amanzi ngokulula.
Akumangalisi ukuba, njengoko ukuthandwa kwebhedu okugcotyiweyo ngeoyile kuye kwenyuka, ke nexabiso lalo. Ihlala iphakathi kwezona zinto zibiza kakhulu kwiimpompo, ke qiniseka ukuba uhlahlo-lwabiwo mali ngokufanelekileyo.
Iingcebiso zokuCoca kwiindidi ezahlukeneyo zokugqiba
Siqaphele ukuba ezinye izinto ezigqityiweyo kulula ukucoca kunezinye. Ngelixa uninzi kulula ukuba lucoceke, kukho izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa uthenga iipompo kwaye ufunde ukukhathalela izinto zakho ezintsha.
Qaphela ngeeWax kunye neeArhente zokugcwalisa
I-wax kunye neearhente zokugcwalisa zisebenza ngokugcwalisa ukungafezeki komphezulu kwiziphelo ezithile, zibanike ukukhanya okuqaqambileyo. Ngelixa iimveliso ezinalezi zithako zilungele ukugqitywa okugqityiweyo, qiniseka ukuba awusebenzisi i-matte okanye i-satin-like finishes. Ezi zigqityiweyo zibhalwe ngokuchanekileyo ukwenza ukungabikho kokukhanya okubonakalayo, kwaye ezi mveliso ziya kongeza ukukhanya okungafunekiyo ngokugcwalisa ezo zinto zenziwe, zihlala ngendlela engalinganiyo okanye ethe tyaba.
Coca nakuphi na ukuGqibela ngeTephu rhoqo
Ngokukodwa ukuba unabantwana, akukho nto ichazayo ukuba zeziphi iintlobo zezinto kunye nezinto ezinokungena kwiifompu zakho. Ezinye iintlobo zezinto zokwakha, ngakumbi ezo zine-asidi, zinokuphela xa ugqibe ekuhambeni kwexesha. Ukuthintela lo monakalo, sula iimpompo zakho rhoqo, nokuba usebenzisa amanzi kunye nelaphu lokomisa kuphela.
Ukucoceka okucocekileyo kokucoca i-Abrasive
Ngumgaqo olungileyo wesithupha ukukhusela abacoci abrasive, kubandakanya iibrashi kunye neziponji ezirhabaxa, kuyo nayiphi na into yokugqibezela itepu ukuze ungazibeki emngciphekweni wokuyikhangela. Nangona kunjalo, oku kubaluleke ngakumbi ukugqitywa kwe-nickel. I-Nickel inokungcolisa okanye irusi ngokulula xa ikrwele, nokuba imikrwelo incinci kakhulu kangangokuba awuyiboni. Ukuthintela lo mngcipheko, khetha amalaphu e-microfiber endaweni yoko.
Ngaphezulu kwako konke, Sebenzisa iZikhokelo zoKhathalelo lwaBenzi
Ngelixa kukho izikhokelo ngokubanzi malunga nokugqitywa okuthile, njengokuthintela ukungonakali kwi-nickel kunye nokuthintela i-waxes kugqityiwe i-matte, kukho umthetho omnye wegolide: landela imiyalelo yakho yokhathalelo lomenzi webhobho.
Abavelisi abohlukeneyo banokwenza okanye basebenzise ukugqiba okufanayo ngeendlela ezahlukeneyo, ke iimveliso ezisebenzela enye zinokonakalisa enye. Ukongeza, ukuba awuyilandeli imiyalelo yokhathalelo lomenzi, inokuyiphelisa iwaranti kwiifompu zakho.
Ukukhetha i-Faucet Faucet yakho efanelekileyo yokuGqibezela
Ekugqibeleni, ukhetho lwakho lokugqiba kwiipompo zakho zangasese zehlela kwisitayile sakho kunye nobunzima kunye nobubi. Thelekisa ukhetho lwakho kunye nesikhokelo esingentla kwaye uya kuba usendleleni yokonwabela iipompo ezifanelekileyo kwigumbi lakho lokuhlambela. Ukufumana iingcebiso ezongezelelweyo ngelixa uthenga, jonga isikhokelo sethu sokuthenga sepompo yangasese.
I-3 Hole 4 Inch Centerset Faucet Brush Nickel
I-Chrome yegumbi lokuhlambela elinombhobho wokuhambisa amanzi
Ngaphambili :: Ukwakhiwa kunye nenkqubo yokuvelisa itephu emnyama next: Ucoceka njani Ukulungiswa kweMatte eMnyama yokuGcina
2021 / 01 / 28 10985